Vagari veNew Orleans vakarairwa kuti vabude seMupupuri Ida oom
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Vagari veNew Orleans vakarairwa kuti vabude seMupupuri Ida oom
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Meya weNew Orleans ari kudaidzira kuti vabvumidzwe kuburitswa munzvimbo dziri kunze kwenzvimbo yekudyidzana, kusanganisira Lake Catherine, Irish Bayou, & Venetian Isles.
New Orleans iri kutarisira kuitika kukuru kubva kuHurricane Ida.
Iyo tropical dutu ikozvino yakarongedzwa seChikamu 1 dutu.
Zvakare fungidziro dzakati Ida inogona kushanduka kuita dutu guru reChikamu 3.
Sezvo New Orleans ichitsigira dutu reHurricane Ida, meya weguta aburitsa nekuraira kubviswa kwevanhu vese vanogara kunze kwenzvimbo yeguta.
"Ino ndiyo nguva yekutanga," New Orleans Meya LaToya Cantrell vakadaro pamusangano nevatori venhau neChishanu apo vaikurudzira vagari veNew Orleans kuti varongedze zvekushandisa vobva dutu risati ratomborova.
Meya weNew Orleans LaToya Cantrell
Akanyanya kuraira munhu wese anogara kunze kwenzvimbo inochengeterwa mvura inodzivirira nzvimbo kubva kumafashama kuti aende kunzvimbo dzakachengeteka, uye akaraira avo vari mukati kuti vafunge zvekusiya futi.
Vaya vari mukati meimba vanogona zvakare kusiya zvavo, Cantrell akadaro.
The US National Mamiriro Ekunze akadaro Chishanu kuti dutu remhepo, iro rakanga rave kuda kusvika kuCuba, parizvino rakarongerwa sedutu reChikamu 1, nemhepo dzaro dzichisvika kumhanho yemakiromita zana nemakumi matanhatu paawa. Hurumende yeCuba yakatoburitsa nyevero yedutu kumatunhu ekumadokero enyika.
Zvakare fungidziro dzakati Ida inogona kushanduka kuita dutu guru reChikamu 3 nemhepo inosvika 193 makiromita paawa painosvika kumahombekombe eUS. “Nzira yekufembera yakananga kuNew Orleans. Hazvina kunaka, ”akadaro Jim Kossin, musayendisiti mukuru weClimate Service.
Gavhuna weLouisiana John Bel Edwards akazivisa mamiriro ekukurumidzira ehurumende neChina achitarisira mamiriro ekunze anoita kuwira kupera kwevhiki rino.
"Zvinosuruvarisa, mhenderekedzo yegungwa yeLouisiana yose iri mumuganhu wekufungidzira," akadaro Edwards, achiwedzera kuti "neMugovera manheru, munhu wese anofanira kunge ari munzvimbo yaanoda kutiza kunze kwedutu."
Dutu guru Ida rinogona kunyatso rova New Orleans pazuva rimwe chetero rakarova Hurricane Katrina makore gumi nematanhatu apfuura - Nyamavhuvhu 16.
Kudzoka muna2005, Katrina akatora hupenyu hunosvika chiuru nemazana masere sezvo yaipisa kuburikidza nenzvimbo yakatambanuka kubva pakati peLouisana mhenderekedzo yegungwa kusvika kutenderera nyika yeMississippi-Alabama. Izvo zvakare zvakakonzera njodzi mafashama muNew Orleans, iine 1,800% yeguta iri pasi pemvura.